Jesse Lingard Oo Rajeynaya Inuu Fursad Ka Helo Bixitaanka Ole Gunnar Solskjaer
HomeWararka CiyaarahaJesse Lingard oo Rajeynaya inuu Fursad ka Helo Bixitaanka Ole Gunnar Solskjaer
Jesse Lingard ayaa rajeynaya inuu heli karo ‘fursad weyn’ si uu u caddeeyo inuu mustaqbal dheer ku leeyahay Manchester United ka dib bixitaankii Ole Gunnar Solskjaer.
28-sano jirkaan ayaan United ugu soo bilaaban kulan Premier League ah ku dhawaad ​​labo sano, waxaana kaliya uu ku ekaaday bedelka ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Lingard ayaa qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay West Ham, waxaana uu ahaa mid aad u wanaagsan mudadaas, isagoo diiwaan geliyay sagaal gool iyo shan caawin 16 kulan oo uu saftay.
Qaab ciyaareedkaas ayaa keentay inuu dib ugu soo laabto tartanka England, isagoo kaliya seegay kulamadii ugu dambeysay ee Gareth Southgate ee Euro. Tan iyo markaas wuxuu dib ugu soo muuqday seddexda libaax xilli ciyaareedkan.
United ayaa diiday inay ku darto ikhtiyaar ay ku iibsan karto heshiiska amaahda ah ee Hammers, Lingard ayaana kalsooni ku qabay inuu saameyn ku yeesho ku soo laabashada Old Trafford. Laakiin ma ahayn in uu hoos yimaado Solskjaer, in kasta oo uu dhawr gool dhaliyay xili uu kasoo kacay kursiga kaydka waxa uu hada rajeynayaa inuu Fursad ka helo bixitaanka Ole.